अप्रत्याशित भावनामा आनन्दित हुने7कारणहरू
अपरिचित प्रेम के हो? प्रेमलाई अपरिहार्य हुन सक्छ, र सामान्यतया प्रेम भनेको के हो? यदि हामी अंततः अवधारणाहरु को बुझ्यो, हामी स्पष्ट रूप देखि परिभाषित गर्न सक्छ कि हाम्रो जीवन के छ, निश्चित रूप देखि, यो धेरै आसान हुनेछ, र ... अधिक उबाऊ। तर, हामीलेसँग के छौँ, र सोच्नुहोस् कि तपाईं अविश्वसनीय प्रेममा हुनुहुन्छ। यस राज्यबाट के गर्ने र कसरी लाभ उठाउन, पढ्न।
दूरीमा प्रेम गर्न सिक्दै
तपाईं एक शहीद जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, तपाई स्वर्गबाट ​​सोध्नुहुन्छ, किन यो तपाईं संग "दुर्भाग्य" भयो। तर तपाईंका अपीलहरू प्रेमको मुख्य सिद्धान्तको विपरीत हो किनभने तपाईंको भावनाको विषय राम्रो थियो। यदि उसले तपाईंलाई प्रेम गर्दैन (अझै सम्म), यस व्यक्तिमा हस्तक्षेप र लागू नगर्नुहोस्, किनकि यो तपाईंको र उनको लागि पनि खराब हुनेछ। उहाँलाई आनन्दित हुन सिक्नुहोस्, किनकि सबै कुरा क्रममा छ र उहाँलाई सबै भन्दा राम्रो चाहियो।
आफूलाई ठूलो कुरामा समर्पित गर्नुहोस्
दुखाइ रचनात्मक उपलब्धिको लागि एक आदर्श जमीन हो। जब हामी अपरिचित छौं, भावनाहरूको उज्ज्वल पैलेट, बलियो, अपरिहार्य भावनाहरू केही प्रकारको च्यानलमा प्रवाह गर्नुपर्छ। तपाईंको "मनपर्ने" चिन्ह बनाउनुहोस्, रचनात्मकताको संसारसँग महसुस गर्दछ र आफैंलाई यस क्षेत्रमा फेला पार्नुहोस्। सायद तपाईं बकाया कवि, पेंटिंगको कुशल मास्टर वा पियानोको प्रतिभाशाली हुन सक्नुहुन्न (यद्यपि यो हुन्छ), तर एक रचनात्मक गतिविधिले तपाईंलाई जीवनको आनन्द महसुस गर्नेछ, विश्वको लागि उपयोगी बनाउनुहोस्, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंको पीडा सुन्दर र अनन्त केहि मा परिणत गर्नेछ।
अपरिचित प्रेम वजन खोने कारण हो?
के तपाईं आफ्नो वजन घटाने कार्यक्रम कार्य र योजनाको सबैभन्दा टाढाको बाकसमा सबैभन्दा लामो समयको लागि राख्नुभएको छ? त्यसपछि तपाईंको हालको अवस्था परिवर्तनको लागि उत्कृष्ट पल हुन सक्छ। आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा रूपान्तरणलाई पूर्णरूपमा, पूर्णरूपमा, र सम्भवतपाईँका परिमार्जित फारमहरू उनीहरूको फ्यानहरू पाउनेछन्।
महिलाहरू सधैं आफैंलाई बचाउँछन्, जबकि धेरै नातेदारहरू, जनावरहरू, दानहरू मा शानदार पैसा खर्च गर्छन्। संसारको प्रेम आफैंको प्रेमको साथ सुरू गर्नु पर्छ, जसको अर्थ छ कि तपाईं आफैंको लागि पैसा तिर्न पर्याप्त छन्। आफैलाई किन्नुहोस् कि वर्तमान मूडमा तपाई आफैले आफैलाई किन्नु र महान् केहि चीज गर्नु आवश्यक छ, तपाईले लामो समयदेखि सपना देखाउनुभयो।
खेलहरूको लागि जानुहोस्
खेलहरू - यो विचारहरूबाट विचलित गर्न उत्तम तरीका हो। तैपनि, जब तपाईं पसीनाले पसीरहन्छ, सांस गुमाउँछ र हृदय तिम्रो छातीबाट बाहिर जान्छ, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, यस समयमा तपाईं कुनै पनि प्रेमको बारेमा सोच्नुहुन्न, न त आपत्तिजनक, न त अपरिचित बारेमा। यसको अतिरिक्त, शारीरिक अभ्यास को समयमा सांस लेने को बढाव को endorphins - हार्मोन को संश्लेषण मा योगदान दि्छ, र यो सिर्फ तिमी के लापता हो!
आफैलाई क्षमा गर्न अनुमति दिनुहोस्
तपाईंसँग दयालुको लागि साथीहरू तयार छन्, उनीहरूको साथ आफ्नो शोक साझा गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईलाई पछ्याउन दिनुहोस्, उनीहरूको हेरविचार गरौं र तपाईंलाई मनोरञ्जन गरौं। सम्झनुहोस्, कुनै पनि वास्तविक साथीले तपाईंलाई उत्प्रेरित गर्न र अवसादबाट बाहिर निस्कन, थप समय दिन सुरु गर्न सक्नेछ। प्रारम्भिक चरणमा यो धेरै उपयोगी हुनेछ, किनकि सबैले आफैलाई एउटै जिममा पुग्न सक्षम छैनन्।
आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहोस्
प्रायजसो नराम्रो केटीहरूले उनीहरूका अपराधीहरूलाई "दुष्टका लागि" बसाल्ने प्रयास गर्छन्। विधि सबैभन्दा सान्दर्भिक छैन, तर धेरै अवस्थामा यो काम गर्दछ। आफैलाई उत्तेजित पार्नुहोस्, सँधै सिद्ध हुनुहोस् - एक आदर्श केशिन, सुई संग ड्रेस गरिएको, सम्पूर्ण परेड को लागी पनि कचरा लाग्दछन्। मुख्य प्रोत्साहन भनेको छ "यदि उसले मलाई भेट्दछ, मलाई 100 जस्तै हेर्नुपर्दछ, उसलाई आफुलाई आफुलाई नम्रता दिनुहोस।"
त्यसोभए, सबै भन्दा माथि प्रेम मिल्चोकलाई छुटकारा पाउन पर्याप्त हुनेछ। यी सिफारिसहरू पछ्याउन प्रयास गर्नुहोस्, र तपाईंको अपरिचित प्रेम तपाईंको जीवन नयाँ जीवनको लागि हुनेछ - सुन्दर, परिष्कृत, छापहरू, परिचितहरू र व्यक्तिगत उपलब्धिहरू।
केहि दिन तपाईं निश्चित रूपमा आफ्नो असफल प्रेमीसँग भेट्नुहुनेछ। तपाई के महसुस गर्नुहुन्छ? अजीब थियो कि उसले तपाईंलाई चोट पुर्याउन सक्छ, किनभने तपाईं यस समयमा अझ राम्रो भएको हुनुहुन्थ्यो, र त्यहाँ त्यहाँ रहनुभयो, हास्यास्पद अतीतमा।
एक प्रिय मान्छेको लागी
हामी छिमेकीको रूपमा हाम्रो पतिसँग बस्छौं - के गर्न?
पुरुषहरूको लागि चुम्बक कसरी गर्ने?
मानिसलाई कसरी प्रेममा पार्ने?
कसरी मानिसलाई मायालु दण्ड दिनुहुन्छ?
कसरी मानिसलाई अविस्मरणीय आनन्द दिने?
स्नानघरको लागि स्लाइड गर्ने स्क्रिन
भित्ताका साथ छाला
यूरो बाड़ बाट बाड़
मकई आटा कुकीज
स्केट्स कसरी छनौट गर्ने?
कसरी मशरूम खेती गर्ने?
सेतो चमकदार टुक्रा टुक्रा
2014 मा स्नातकोत्तर
साथीहरूलाई 8 मार्चका सहकर्मीहरूलाई
कुकुरबाट कुकुरलाई कसरी संरक्षण गर्ने?
भान्सा - एक हब संग fireplaces
विक्टोरिया बेकम - कपडे
भान्सामा वालपेपर संयोजन
चिफन स्कर्ट 2013
चिनियाँ कमजोरीहरू लागू गर्नुहोस्